डेंगी रोकथाममा किन हुन सकेन समन्वय ? | Rajmarga
डेंगी रोकथाममा किन हुन सकेन समन्वय ?
पछिल्लो समय केही जिल्लामा फैलिएको डेंगी रोगको रोकथाममा केन्द्र र प्रादेशिक निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्यका सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाइएकोले अब उनीहरूकै जिम्मेवारी हुने बताएको छ।
तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट परिचालन अझै हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दशैँका बेला काठमाण्डूको बालाजुमा डेंगीका सातजना बिरामी भेटिएकोमा सबैभन्दा बढी बिरामी पोखरामा भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यहाँ उपचाररत एक सयभन्दा बढी बिरामीमध्ये तीन जनालाई सघन उपचार कक्षमै भर्ना गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। संवेदनशील रोग भएकोले त्यसको नियन्त्रणमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय अधिकारीहरूको तर्क छ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख विवेककुमार लाल भन्छन्, बजेट सबै स्थानीय तहमा गइसकेको छ।
“देशैभरि वितरण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन वा त्यस्तै खाले कार्यक्रम कहिले चलाएको छैन। अर्को कुरा परीक्षण गर्ने उपकरण आपूर्ति गर्ने भनेर सरकारले शुरूदेखि कार्यक्रम नै ल्याएको छैन।”
“नियन्त्रणका लागि र बफर औषधि खरिद गर्नका लागि भनेर यो वर्षदेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ। उहाँहरू आफैँले खरिद गर्ने कुरा हो।”
केन्द्रले अन्य सरसल्लाह दिए पनि डेंगी भए वा नभएको परीक्षण गर्ने उपकरण एक सयवटा मात्र पठाएको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको गुनासो छ।
स्थानीय तहसँग बजेट भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नहुँदा अर्को अप्ठेरो परेको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए।
“अहिले प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय भर्खरै स्थापित भएको हुनाले अख्तियारी आइपुगेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि बजेट छ। तर त्यहाँ पनि अख्तियारी प्राप्त भइसकेको छैन। रोग फैलिन नदिन प्रदेश र महानगरपालिकाको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए। स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ।
“अहिले प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय भर्खरै स्थापित भएको हुनाले अख्तियारी आइपुगेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि बजेट छ। तर त्यहाँ पनि अख्तियारी प्राप्त भइसकेको छैन।
रोग फैलिन नदिन प्रदेश र महानगरपालिकाको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए। स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ।
Previous post: जसका ‘वक्ष’का ट्याटु भाइरल भइदियो
Next post: विष्णु राईको लोकदोहोरी गीत ” सगैँ जिउला सगँसगैँ मरौला” (भिडियोसहित)
म्यासेडोनियामा नाम परिवर्तन गर्न चाहिने मत किन पुगेन ?
आज गैरआवासीय नेपाली दिवस, देशविदेशमा विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै
आज मान्यजनको हातबाट टीका लगाएर विजया दशमी मनाइँदै, विजयादशमीको साइत ०९ः५१ मा
कोरोना भाइरस अमेरिका : ‘विना मास्क खोप लगाएकाहरू भेटघाट गर्न सक्ने’
पर्यटकको रोजाइमा पश्चिम चितवन
प्रचण्ड र माधव माओवादी र एमालेमै